external - Synonyms of external | Antonyms of external | Definition of external | Example of external | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for external
Top 30 analogous words or synonyms for external
မြန်မာဘလော့ဂါများ = External Link =
လက်ပ်တော့ပ် ကွန်ပျူတာ ပုံမှန်လပ်တော့တစ်ခုတွင် USBports, an external monitor port (VGA, DVI,HDMI or Mini DisplayPort), an audio in/out port (အပေါက်တစ်ခုတည်းပါသောပုံစံလည်းရှိ) တို့ပါဝင်သည်။ ၂၀၁၄ လောက်က လပ်တော့များတွင် Mini DisplayPort တစ်ခုတည်းမှ multi-stream transport technologyကိုအသုံးပြု၍ external displays သုံးခုအထိချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Wp:wikilinks Without the optional text, external references appear as automatically numbered links: For example,
Wp:wikilinks Links that are not used as sources can be listed in the External links section, like this:
Wp:wikilinks Linking through hyperlinks is an important feature of Wikipedia. Internal links bind the project together into an interconnected whole. Interwiki links bind the project to sister projects such as Wikisource, Wiktionary, and Wikipedia in other languages. And external links bind Wikipedia to the external World Wide Web.
Wp:wikilinks As with other top-level headings, two equal signs should be used to mark up the external links heading (see "Headings" elsewhere in the article). "External links" should always be the last section in an article. It precedes categories and some kinds of .
အင်ဂျင် အင်ဂျင်တစ်လုံးသည် အပူစွမ်းအင်ကို စက်မှုစွမ်းအင်သို့ပြောင်းလျှင် ထိုအင်ဂျင် ကို Heat Engine (အပူအင်ဂျင်) ဟုခေါ်သည်။ အပူအင်ဂျင်ကို Internal Combustion Engine (အတွင်းမီးလောင်ပေါက်ကွဲသော အင်ဂျင်) (I.C Engine) များနှင့် External Combustion Engine ( အပြင်မီးလောင်ပေါက်ကွဲသော အင်ဂျင်) များဟူ၍ခွဲခြားနိုင်သည်။
Wp:wikilinks You should not addadescriptive title to an embedded HTML link within an article. Instead, when giving an embedded link asasource within an article, simply enclose the URL in square brackets, like this: codice_6 → . However, you should addadescriptive title when an external link is offered in the References, Further reading, or External links section. This is done by supplying descriptive text after the URL, separated byaspace and enclosing it all in square brackets.
အစာခြေ စနစ် အစပိုင်း Caecume (စေကမ်)၊ အထက်-ဘေးတိုက်-အောက်ဆင်းသည့်အပိုင်း Colon (ကိုလုံ)၊ အစာဟောင်းအိမ် Rectum (ရက်တမ်) ဟူ၍(၃)ပိုင်းခေါ်သည်။ ၅ စင်တီမီတာရှည်သည်။ စအို Anal cannel (အေနယ်-ကင်နယ်) သည် ၂-၃ စင်တီမီတာရှည်သည်။ အစာခြေရည်မထုတ်၊ ရေနှင့် ဓါတ်ဆားများ စုပ်ယူပေးသည်။ ဝမ်းကိုထုတ်ပြစ် ပေးသည်။ စအိုအဝ၌ Internal and External anal sphincters (စဖင်တာ)များရှိသည်။
နိကာယ် ငါးရပ် နိဒါနဝဂ္ဂသံယုတ်ကျမ်းသည် အကြောင်း(နိဒါန)နှင့် အကျိုးဆက်စပ်ပုံ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဟောကြားထားသော တရားတော်များဖြစ်၍၊ ခန္ဓဝဂ္ဂသံယုတ်ကျမ်းသည် ခန္ဓာငါးပါးနှင့် ပတ်သက်၍ ဟောကြားထားသော တရားတော်များဖြစ်သည်။ သဠယတနဝဂ္ဂသံယုတ်ကျမ်းတွင် အာရုံသိမှုအတွေ့အကြုံ (experience)၏ အခြေခံဖြစ်သော ဗာဟိရာယတန (external bases) ခေါ် အာရုံခြောက်ပါးနှင့် အဇ္ဈတ္တိကာယတန (internal bases) ခေါ် ဒွါရခြောက်ပါးတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသော တရားများဖြစ်သည်။